व्यवस्थामा दोष छैन,शासन चलाउने दोषी | रेडियो झापा 100.7 MHz.
व्यवस्थामा दोष छैन,शासन चलाउने दोषी
रेडियो झापा 100.7 MHz. बुधबार, चैत्र ०९, २०७८ ७:१०:२३
अहिले हाम्रो देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा चलिरहेको छ । यो ब्यवस्था आफैमा राम्रो व्यवस्था हो तर यो ब्यवस्था संचालनकर्ता खराव भए । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुलाई सबैले आलोचना मात्र गरिरहेको देखिन्छ । यति हुँदा पनि खराव हाम्रा कतिपय नेता सुध्रर्न खोज्दैनन् ।
विगत देखि अहिले सम्म नेताहरुको ब्यवहार उस्तै छ । व्यवस्थालाई दोष दिनु हुदैन । शासन चलाउनेलाई दोष दिनु पर्छ । गलत शासनले जनतामा बितृष्णा र निराश ल्याउँछ । त्यसो भयो भने ब्यवस्था माथि खतरा आउन थाल्छ । जनताले परिवर्तन गरेर ल्याएको ब्यवस्था हो यो । राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताहरुले मनपरी गर्न पाइदैनन् । आज देश विकासको गतिमा अघि बढन सकिरहेको छैन् । देश बिकासको बाँधक कुन हो ? अब हामीले सोच्नु पर्ने बेला भएको छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताहरुले खाली नेपाली जनतालाई भ्रममा पार्ने र भोट तान्ने काम बाहेक अरु केही देखिएको छैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनता सुखि र खुशि हुनु पर्ने हो त्यस्तो देखिएन । यो सब गलत नेताको हातमा शासन ब्यवस्था जानुले हो । देशको शासन व्यवस्था राम्रो संग चल्न सकेन भने देश र जनताले दुख्ख पाउँछन् । अहिले भएको त्यही हो । जनताले राम्रो संग खान पाएका छैनन् । महिना नबित्दै महंगी बढेर जनता हैरानीमा छन ।
मान्छेको आयस्रोत भन्दा खर्च बढेर गएको छ । अनि जनताले कसरी आफनो जीविका चलाउन सक्छन । महंगीले जनता आक्रान्त र आर्कोशित छन । सरकार जनजीविकाका बिषयमा त्यति गम्भिर देखिएन । यो बडो चिन्ताको बिषय हो । यो ब्यवस्थामा नेताहरु मात्र मोटाउने जनता दुब्लाउने अबस्था देखिएको छ । यसले पनि जनतामा एकखालको नैराश्यता पैदा गरेको छ । अब नेताहरुमा सुधार आउन सकेन भने ठूलो समस्या उत्पन्न हुने खतरा छ । यो देशका कर्मचारी पनि लुटेरा भए ।
देश लुटन कर्मचारी पनि अग्र पंक्तिमा छन । सबै कर्मचारी त्यस्ता छैनन् । सबैलाई दोष पनि दिनु हुदैन । देशलाई खोक्रो बनाएर देश लुटनेहरुलाई जनताले एक दिन कठघरामा उभाउने छन । यहाँ त जसको शक्ति उसको भक्ति पो भएको छ । यसरी देश चल्दैन र जनता पनि सधै निरीह भएर बस्दैनन् । यस व्यवस्थालाई विश्वमै लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सर्वाधिक उत्तम ब्यवस्था भनिन्छ । तर नेपालमा गलत र खराव नेताका कारण देश अघि बढन सकेन ।
अब जनताले राम्रो नेता छान्नु पर्ने बेला आइसकेको छ । मुलुकमा शासकीय व्यवस्थाभन्दा पनि शासकहरु काम नलाग्ने हुन् । केही व्यक्तिमा परिवर्तन आए पनि प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएन । सबै भन्दा ठूलो समस्या हो यो । देशको शासन व्यवस्था जनताको बलमा फेरिएको हो । तर व्यवस्था सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको सोच र चिन्तन फेरिएन । हरेक शासन व्यवस्थामा नागरिकले ठूलो आशा र अपेक्षा राखेका हुन्छन । जुन स्वाभाविक पनि हो । देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको झण्डै १६ वर्ष बितिसकेको छ । तर नेताहरुले जनता सामु बोलेका बाचा र प्रतिबद्धता अझै पुरा हुन सकेका छैनन् ।
देशभित्र रोजगारी सृजना गर्नुको सट्टा सरकार देश बनाउने युवा जनशक्तिलाई विदेश पठाउने कार्यमा प्रोत्साहन गरिरहेको छ । नेपालमा भएका उद्योगधन्दा कलकारखाना बन्द भएका छन् । नयाँ उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारको पटक्कै ध्यान गएको देखिदैन । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेको कृषि क्षेत्रले हो ।
यो क्षेत्रको सुधारमा सरकारले राम्रो सोच लिन सकेन । यो व्यवस्था आफैमा राम्रो छ । तर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व अक्षम हुँदा देश बिकासको हिसावमा पछि परेको हो । जसको कारण जनताले दुःख र सास्ती झेल्दै आएका छन् । संविधानमै देश समाजवादउन्मुख हुने विषय उल्लेख भए पनि समाजवादतर्फ जाने विषयमा अहिलेसम्म सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको कुनै ध्यान पुग्न सकेको छैन ।